Waa in la ogaadaa in wallpapers ayaa had iyo jeer soo jiidatay dadka isticmaala si loo hubiyo in nidaamka uu u muuqdo mid ma aha oo kaliya wanaagsan iyo maskaxda ku rukuucsan laakiin sidoo kale soo bandhigaysaa ugu fiican in user ee arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in tutorial ayaa si toos ah si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah tahay qoreysa wallpapers ee la xiriirta ugu dambeeyay OS sida daaqadaha 10 aan la soo bandhigay oo keliya laakiin user sidoo kale uu helo macluumaad ah in loo baahan yahay in arrintan la xiriira.
20 wallpapers qurux daaqado 10
Sida loo wallpapers Mudanayaasha daaqadaha 10
Ka dib waxaa liiska 20 wallpapers cabsi badan ee la xiriirta daaqadaha 10:
1. Fantasy u gudubno,
Soo diyaariyay hayo doorashada user maskaxda ku wallpaper this hubaal ka dhigi doonaa hubiyo in user helo natiijada ugu fiican ee la xiriira asalka guud. Khaatiyaanka ee wallpaper waa fantastik ah, sidaa darteed waxa habboon si aad u hubiso in user helo waayo-aragnimo ugu fiican.
2. goobta dhac
Si aad u sii in ku dhow dabeecadda waa wax kasta oo weligood mid ka mid ah isticmaalka doonayo iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in user Hubi in ka dhigi kartaa in wallpaper hoose aan la soo bixi oo kaliya laakiin waxaa la dhigay asalka joogto ah desktop-ka si ay saamayn qabow waxaa had iyo jeer dareemay.
Wallpaper 3. ay ciyaareyso ay
Windows 10 xaqiiqo ah ku soo dejin doonaa waayo-aragnimada ugu wanaagsan ee ciyaaraha u isticmaala, laakiin sidoo kale waa in la ogaadaa in user ayaa sidoo kale ka heli doontaa alaabta ciyaaraha ugu fiican ee la xiriirta bandhigay iyo wallpaper this ka hadashaa nafteeda.
Hubiyo in user ku qanacsan yahay in xushmad kasta mid kasta oo inaga mid ah sida Swansea ay ugu muuqdaan cad qabow sida sameeyaan. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in ugu fiican iyo kan gobolka ee wallpaper tahay la soo bixi in la siiyo desktop eegaan abid cagaaran sameeyo
5. Marka la eego biyaha
Wallpaper Taas ayaa ka dhigaysa hubiyo in kuwii ku caashaqi jiray badda waxaa la cafiyo iyo gaar ahaan waa wallpaper ugu wanaagsan kuwa ka jecel sida ambiance ah oo doonaya in ay abuuraan dalwaddii deegaanka la xidhiidha arrintan la xiriira
Mar wallpaper this ballan qaaday in user wuxuu ahaan doonaa kan ku dhow inay dabeecadda iyo theme ee wallpaper, Taasuna waa si waafaqsan magaca iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in dadka isticmaala ay tahay in ay hubiyaan in meel looga cabsado waa hubaal bixi .
Ma jiro qof naga mid ah neceb music iyo sabab la mid ah wallpaper waa la abuuray si ay u hubiyaan in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay in arrintan la xiriira iyo sidoo kale helo jacaylka u music wanaajiyey:
8. Bridge tareenka
In kastoo dalwaddii laakiin wallpaper this hubaal xusuusin doonaa user of maalmood jir. Waa gabal ugu fiican ee farshaxan kuwa doonaya in ay u hubiyaan in wax gaar ah waxaa loogu tala galay desktop-ka oo dhan.
9. aan la taaban karin Art
Buuxi wallpaper ka maran iyada oo xoogga tahay aan la taaban karin sida ay u hubiso in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah muuqaalada tahay gundhig ay gudahood ka dhigi doonaa. Waayo, kulli kuwii ku caashaqi jiray dahsoon tahay wallpaper tani waa taam kaamil ah:
Hadduu khamri duug ah ee dhalada cusub Hadalku waa ku habboon in wallpaper iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in cad tani waa in kaamilka ah oo dhan xeebta iyo badda kuwii ku caashaqi jiray.
Ey xasilloon fadhiya Gogol waa wax aan jeclahay oo aan sidaa wallpaper tani waa taam kaamil ah kuwa iska leh eey oo dhan. Kartoono lagu A cute daawashada at user mar kasta oo desktop la heli waa waxa ugu fiican ee ugu macquulsan ee abid ka dhici karto.
12. Apple cunaa Android
In kastoo theme uu is beddelay, laakiin weli u xafiiltamaan ee dhaqanka waxaa lagu soo bandhigay habka ugu fiican. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ee arrintan la xiriira waa hubaal dooran kooxda sida android ama arrimo ka hor wallpaper ayaa lagu wadaa 
13. Fish boodayaa biyihii ka soo baxay
Sidoo kale waa mid ka mid ah wallpaper ugu wanaagsan ee lagu siiyo eegno cusub iyo enchanting in desktop-ka iyo in la hubiyo in la aqonsado waa ay jiraan in la siiyo fikrad ku saabsan nooca user ee.
Wallpaper 14. Love
Jacaylku waa wax aan dhamaanteen u baahan tahay ugu iyo sabab la mid ah wallpaper tani waa inuu hubiyo in cod isticmaalaha la sara kiciyaa ilaa xad ka dhigi doonaa. Qaabka ugu fiican iyo xardho erayga la sameeyo hab kaas oo u hubinaya in aragti isticmaala inkasta oo iska xanaajin ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday habka ugu fiican:
15. dhakada farshaxanka
Sidoo kale waa mid ka mid ah wallpapers ugu fiican in muujinayaan in nin mid ma ahan oo aan dabiiciga ahayn ee la xiriirta ee ku hareeraysan oo ugu wanaagsan ayaa sidoo kale lagu muujinayaa in arrintan la xiriira marka ay timaado wallpaper taasi cabsi badan:
Fiirinaya xiddigaha waa wax hiwaayad ah oo ka user waa in la hubiyo in ugu fiican ayaa loo gudbiyey in desktop marka wallpaper tani waxaa lagala soo bixi iyo sidii asalka ah sameeyo. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ka dareemi kartaa saameyn la mid ah sidii iyadoo ay dhammaan la sameeyey run ahaantii.
Theme 17. wareejin berry wheel
Sidoo kale waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo tan gobolka ee wallpapers tahay in la hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan ka dhigi lahaa iyo sidoo kale helo gobolka muuqaalada tahay in lagu gundhig gudahood theme ah. Si aad u buuxiso desktop-ka wax laga cabsado waa haddii wallpaper tani waxaa la bixi.
Dabiiciga ah 18. Ixtiraamka
Waa hagaag tani waa waajib ku ah dhammaan oo naga mid ah oo aan sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in farriin loo dhiibaa sida ugu wanaagsan ee la sameeyo:
Dabiiciga ah 19. Urban
Weli fariin u awood badan oo kale oo uu soo gudbiyey in dadka aan ereyga kula hadlin ah oo ay tahay waa in ay leeyihiin waayo, dhammaan user kii u fahmaan waxa ka dambeeya sawirka:
Si aad u xukumaan dad kale waa doonayo qof kasta oo iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in gudaha waxaa ku qancay soo dejinta wallpaper sida asalka desktop ah sameeyo.
Ka dib waxaa lagu hago in ay tahay in la raaco arrintan la xiriira:
1. user waa inay hubiyaan in desktop waxaa xaq u riixi si ay u helaan fursad u shakhsiyeeyo:
2. daaqad cusub user inay hubiyaan in asalka desktop la sugayay hoose ka dhigi kartaa:
3. user ayaa hubin kara in wallpapers waxaa ka ikhtiyaarka by Author sawirka doorashada u gaar ah si loo soo afjaro nidaamka:
> Resource > Windows > Top 20 daaqadaha cabsi badan 10 wallpapers aad desktop